Maitiro ekubhowa kubva kuUSB muVirtualBox? | Linux Vakapindwa muropa
VirtualBox chishandiso chakanakisa izvo zvinotibvumidza isu kuti tigone kugadzirisa mashandiro masisitimu ayo ane rutsigiro rweGNU / Linux, Mac OS X, OS / 2, Windows, Solaris, FreeBSD, MS-DOS nevamwe vazhinji.
Neichi chishandiso chakakurumbira isu tinochengetedza zviwanikwa, tinogona kudzidza nezve masystem nyowani tisingafaniri kukanganisa ruzivo rwedu, kuyedza kunyorera kubva kune mamwe masisitimu uye pamusoro pese kune akati wandei masystem uye kugona kuishandisa pasina kusunungura iyo yatinayo.
Virtualbox Inozivikanwa zvakanyanya nehunhu hwayinotipa, pakushandiswa kwayo isu tinowanzo shandisa ISO mifananidzo yemasystem atinozomhanya paVirtualBox,
Izvo zvinotibvumidzawo isu kushandisa zviwanikwa zvine timu yedu.
Mune ino kesi dambudziko raitika kwandiri uye nderekuti ini ndaifanira kutanga sisitimu yandinotova nayo paUSB, saka kana ndichiedza kubaya mudziyo uyu muVirutalBox, hazviite nenzira yakajairika.
Chinhu chine musoro chaizove chekuisa iyo USB mune runyorwa rwezvigadzirwa mu Virtual Machine gadziriso, asi nekushamisika zvaive zvisina kudaro.
Kune izvi ndakatsvaga mambure ndikawana iyi mhinduro yakapusa yandinogovana newe.
1 Shandisa USB kubhodhi sisitimu muVirtualBox
2 Uchishandisa Plop Boot Manager
Shandisa USB kubhodhi sisitimu muVirtualBox
Tichavimba nebasa risingaonekwe uye ndeyekuti isu tinofanirwa kushandisa chikamu cheVBoxManage raira, kuti tiite izvi.
Chinhu chekutanga chatinofanira kuita kuziva nzvimbo yekukwira yeUSB yedu iyo ine iyo system. Zvino kana uine VirutalBox yakavhurika, unofanirwa kuivhara.
Kuti tiite izvi isu tinofanirwa kuvhura terminal (ctrl + T) uye nekuita unotevera kuraira:
Mune yangu nyaya yangu USB mount point ndeye / dev / sdc. Izvi zvinogona kusiyana zvichienderana nehuwandu hwemidziyo yekuchengetera yavakabatanidza panguva iyoyo.
Mount point yatove kuzivikanwa, pane imwecheteyo terminal, isu tichaenda kunotevera kuraira, zvakakosha kuti zvifambiswe neropafadzo:
Kupi Tiri kukuudza iwe kuti ugadzire iyo nyowani diski iyo inozonongedzerwa yakananga kune yedu USB kifaa.
Iye zvino Hatifanire kubvisa yedu USB kifaa kusvikira tapedza basa iyo iyo yaive yakarongerwa pakutanga.
Nhanho inotevera ichave yekuvhura VirtualBox zvakare uye isu tichaenda kumaseji emuchina chaiwo kwatinozotora mudziyo wedu.
Zvino isu musoro Muchikamu chekuchengetedza, tinowedzera nyowani drive uye pachinzvimbo chekugadzira yuniti nyowani, tichaenda kusarudza iripo.
Mune ino kesi isu tichaenda kusarudza iyo yawakangogadzira neye yapfuura rairo.
Zvaitwa izvozvi isu tichaenda kunochengetedza chaiwo masisitimu emuchina uye nekuenderera mberi kutanga iyo system kuti uone kuti iyo chaiyo drive iri kunyatso kunongedzera kune yedu USB.
Chekupedzisira, zvinongosara kuti iwe utsanangure nguva yekushandisa, pakupera kweizvi, tinodzokera kumagadzirirwo emuchina chaiwo uye woenderera mberi nekubvisa iyo unit kubva pane runyorwa rwezvigadzirwa.
Kushandisa Plop Boot Maneja
Iyi imwe sarudzo yandakawana pamambure, kubva pakuona kwangu chimwe chinhu chakareruka kana iwe uchifunga kuti nzira yapfuura yakaoma.
Pakati pesarudzo dzainotipa tinowana:
Kukwanisa kuita bhuti re USB hapana rutsigiro rweBIOS.
Isu tine kugona kwekuvanza zvikamu.
Tinogona kutsanangura kusvika pamatanho gumi nematanhatu.
Ichi chishandiso chidiki chinotibvumidza kubhuroka kubva kuUSB nenzira inotevera.
Kutanga isu tinofanirwa kurodha ichi chishandiso chinouya diski mufananidzo, chinongedzo ichi.
Kana kurodha pasi kwaitwa, isu tinoenderera mberi nekukwidza iyo ISO senge chero ipi kubva kuVirtualBox marongero.
Kana izvi zvangoitwa, isu tinochengetedza marongero uye tinopfuurira kumhanya chaiwo muchina.
Iyi skrini inotevera inoratidzwa.
Uye ikozvino tinogona kusarudza simba rekutanga kubva kuUSB.
Kana nzira iyi yave ichikubatsira, usazeze kuigovana pane ako maratidziro uye kana iwe uchiziva chero imwe nzira yenyaya iyi, usazeze kuigovana nesu mune zvakataurwa.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Resources » Maitiro ekubhowa kubva kuUSB mu VirtualBox?
Kana iwe uchida kugadzira muchina chaiwo paPC, asi ini handina iyo ISO (gadza FROM uye ASI PENDRive.
Miswe 3.6: iko kusazivikanwa kugoverwa kwakaburitswa pamwe nekuvandudzwa